Barcelona oo si dirqi ah saddexda dhibcood kaga soo heshay kooxda Deportivo Alaves oo ay booqatay… +SAWIRRO – Gool FM
(Vitoria-Gasteiz) 23 Jan 2022. Barcelona ayaa si dirqi ah saddexda dhibcood kaga soo heshay kooxda Deportivo Alaves oo ay ku booqatay garoonka Mendizorrotza, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 0-1, ciyaar qeyb ka ahayd kulammada toddobaadkan ee horyaalka La Liga.
Qeybta hore ayeey labada kooxood Deportivo Alaves iyo Barcelona ku kala nasteen barbardhac 0-0 ah.
Daqiiqadii 87-aad kooxda Barcelona ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana 0-1 ka dhigay Frenkie de Jong, kaddib caawin kara timid Ferran Torres.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhammaatay 0-1 ay kaga soo adkaatay Barcelona, kooxda Deportivo Alaves oo ay booqatay, Barca ayaa hadda ku jirtaa kaalinta 5-aad ee kala sareynta horyaalka La Liga, waxayna leedahay 35 dhibcood.
Dhaawac soo gaaray, rigoore uu khasaariyay iyo gurigiisa oo la jabsaday - maalin u xun Karim Benzema